Semalt: Izindlela zokuhlaziya ukusebenza kwe-SEO yakho
2. Kungani uhlaziya ukusebenza kwe-SEO yakho kuqala?
3. Ukuhlaziya ukusebenza kwe-SEO yakho
6. Abaphathi beWebhu beGoogle
7. Ijubane lekhasi
Ufuna ukukleliswa phezulu ku-Google TOP? Ufuna ukushayela ithrafikhi ethe xaxa kuwebhusayithi yakho? Ufuna ukwandisa ukungafani okuphumelelayo kwebhizinisi lakho? Ukuhlaziywa kwe-SEO kungenzeka kube yinto oyidingayo. Imininingwane eqoqwe ingasiza ekwenzeni izinqumo zamasu wokuthuthukisa izinga lewebhusayithi yakho ezinjini zokusesha, ukushayela ithrafikhi ethe xaxa kusayithi lakho nokunye okuningi.
I-Semalt inethuluzi elinamandla lokuhlaziya lewebhusayithi lokuqapha ngempumelelo imakethe; ukulandela isikhundla sewebhusayithi yakho kanye nalabo oncintisana nabo; futhi baletha kuwe umbiko webhizinisi wokuhlaziya ngokuphelele.
Kungani uhlaziya ukusebenza kwe-SEO yakho kuqala?
1. Ukuqapha isikhundla sewebhusayithi yakho: NgoSemalt, uvunyelwe ukudala isithombe esiphelele sendlela izinto ezigcina ngayo ibhizinisi lakho emakethe online. Ngemininingwane etholakele, uzokwazi ukugqamisa amaphuzu abalulekile emsebenzini wakho wesikhathi esizayo.
2. Ukuthola izimakethe ezintsha: Uzothola amathuba amasha okusatshalaliswa kwempahla nezinsizakalo zakho nokukhiqizwa komkhiqizo kwakho okuphelele emazweni athile okuzoqala amasu webhizinisi elihlobene nesifunda ebhizinisini lakho.
3. Ukugcina iso kwizikhundla zabaqhudelana bakho : USemalt ubuye aveze yonke imininingwane ephathelene nesimo semakethe sabancintisana bakho. Lolu lwazi luzokusiza ukuthi uqhamuke namasu asebenzayo wokuhlala ungaphambi kwephakethe njengoba uzothola izinto abazenzayo ngokufanele ongabethelela ezinhlelweni zakho ezisebenzayo.
4. Ukwenza isethulo sokuhlaziywa kwakho: ISemalt ikunikeza ithuba eliyingqayizivele lokwenza imibiko enombhalo omhlophe wokuhlaziywa kwakho ongawalanda kalula kumafomethi e-PDF noma e-EXCEL ngqo kusayithi labo. Lokhu kubaluleke kakhulu uma udinga ukwenza izethulo zamakhasimende akho noma neqembu lakho.
Ukuhlaziya ukusebenza kwe-SEO yakho
Ngemuva kokungena ngemvume kudeshibhodi yakho, ungachofoza isithonjana semenyu ngakwesokunxele lapho uzobona khona uhlu lwezindlela zokuhlaziywa kwe-SEO.
Ngaphezulu kakhulu, ungazikhethela ukwengeza iwebhusayithi ofuna uyihlaziye. Ngezansi kwalapho, unenkinobho yedeshibhodi yakho ongachofoza kuyo nganoma yisiphi isikhathi lapho uzizwa sengathi uya kudeshibhodi yakho.
Ngemuva kwalokho ngezansi kwenkinobho yedeshibhodi, ngamathuluzi amakhulu wokuhlaziywa kweSemalt ahlukaniswe izigaba ezi-4 - i-SERP, Okuqukethwe, i-Google Webmasters ne-Page Speed.
Ake sibheke ukuthi ngalinye lala mathuluzi lisebenza kanjani. Kubalulekile ukuqaphela lapha ukuthi ungalanda umbiko njalo lapho ubona khona inkinobho ye-'Fumana Bika '.
I-SerP inezigatshana ezi-3 ngaphansi kwayo:
a. Amagama agqamile ku-TOP: Umbiko utholwe usuka lapha uveza wonke amagama asemqoka isayithi lakho ahlela ukuhlangana kuwo kwimiphumela yokusesha ye-Google, amakhasi abekwe ezikhundleni zawo, kanye nezikhundla zawo ze-SERP zegama elingukhiye elithile. Uma uchofoza 'Amagama angukhiye ku-TOP', uzothathelwa ekhasini lapho ungabona khona inani lamagama asemqoka ku-TOP, amagama asatshalaliswa yi-TOP namazinga ngamagama asemqoka.
'Inombolo yamagama angukhiye' ishadi elibonisa inani lamagama angukhiye kuGoogle TOP ngokuhamba kwesikhathi. Lokhu kukusiza ekuhloleni ushintsho ngenombolo yamagama angukhiye isayithi lakho eliwutholile kwimiphumela yokusesha ye-TOP 1-100.
Ngokusatshalaliswa kwamagama angukhiye yi-TOP ', ungathola inani eliqondile lamagama angukhiye isayithi lakho lewebhusayithi yeGoogle TOP 1-100 yosesho lwezinto eziphilayo olusekwe ngosuku lwangaphambilini.
'Amasheya ngamagama asemqoka' itafula elibonisa amagama angukhiye athandwa kakhulu amakhasi akho wewebhusayithi ayitholayo kwimiphumela yokusesha ye-Google TOP. Ithebula lizokukhombisa nezindawo zabo ze-SERP ngezinsuku ezikhethiwe nezinguquko ezenzekile ezisethwe ngosuku olwedlule. Uma uchofoza inkinobho ethi 'ukuphatha amaqembu', ungakha iqembu elisha lamagama asemqoka, uphathe amanye akhona noma ungakhetha ukukhetha amagama agqamile etafuleni elithi 'Amazinga ngamagama angukhiye' ngezansi uwafake eqenjini lakho lamagama angukhiye. Lokhu kubalulekile ngoba ungayisebenzisa ukuqapha inqubekela phambili yewebhusayithi yakho ngesihloko, i-URL, njll.
I-Semalt futhi ikunikeza ithuba lokuhlunga idatha etafuleni ngamapharamitha ahlukile - igama elingukhiye noma ingxenye yalo, i-URL noma ingxenye yalo, iGoogle TOP 1-100 nezinguquko zesikhundla.
b. Amakhasi Ahamba Phambili: Uma uqhafaza ku- 'Best amakhasi', uzokhonjiswa amakhasi kusayithi lakho aletha inani eliphezulu kakhulu le-organic traffic. Kufanele ukutadishe lokhu ngokucophelela, ubheke amaphutha we-SEO asekhasini, ulungisa la maphutha, ungeza okuqukethwe okungafani nalutho kanye nokukhuthaza lawa makhasi wenzalo ethe xaxa ye-traffic.
'Amakhasi amahle ngokuhamba kwesikhathi' ishadi elembula ushintsho enanini lamakhasi akho e-TOP selokhu kwasungulwa iphrojekthi yakho. Ungahlola idatha ngeviki noma ngenyanga lapho ushintsha isilinganiso.
Ngezansi 'Amakhasi amahle ngokuhamba kwesikhathi', unethuluzi 'Lomehluko' ekusiza ukuthi uthole inani lamawebhusayithi kuGoogle TOP 1-100 imiphumela yokusesha ye-organic ebekwe ngosuku lwangaphambilini. Ungashintsha esikalini ukuze uhlole umehluko ngesonto noma ngenyanga. Futhi unenketho yokubuka umehluko ngokwezinombolo noma ngefomethi yomdwebo.
Kukhona futhi ishadi elibizwa ngokuthi 'Abakhethiwe amakhasi okhiye wamagama' elibonisa izinguquko ezinombolweni yamagama okhiye amakhasi akhethwe kuwo kuGoogle TOP kusukela ekuqaleni iphrojekthi.
Okokugcina, sinamakhasi ku-TOP ', okuyitafula elibonisa inani lamagama okhiye ikhasi elibekiwe kuGoogle TOP ngezinsuku ezikhethiwe. Ungahlunga futhi uhlu lwamakhasi ahamba phambili nge-URL noma ingxenye yayo bese ukhetha futhi ukukhetha amakhasi kuwebhusayithi yakho aku-TOP 1-100 simo.
c. Abaqhudelana: Yilapho uzothola wonke amawebhusayithi aklelona TOP 100 yamagama angukhiye afanayo kuwebhusayithi yakho. Uzobona futhi ukuthi umi kuphi phakathi kwezimbangi zakho ngenombolo yawo wonke amagama angukhiye ku-TOP 1-100.
Kuleli khasi, uzothola isethi yemabhuloksi ebizwa ngokuthi 'Amagama Awabelanwe' okwabonisa inani lamagama angukhiye owabiwe isayithi lakho kanye nezimbangi zakho ze-TOP 500 ezikwiGoogle SerP.
Okulandelayo, uthola i- 'Shared Keywords Dynamics' okuyisitadi esibonisa ushintsho kunombolo yamagama angukhiye owabiwe lapho izimbangi ezithile ozigqamisile zibalile ku-TOP.
Ngezansi uzobona 'Ukuncintisana kuGoogle TOP' okuyithebula eliveza inani lamagama angukhiye owabiwe wena nesikhundla sewebhusayithi yakho. I-Semalt ikunikeza inketho yokufunda umehluko ngenombolo yamagama angukhiye okwabiwe ngawo ngosuku olungaphambili. Ungahlunga futhi uhlu lwamawebhusayithi akho wezimbangi usebenzisa isizinda esigcwele noma ingxenye yaso futhi ungahambisa uhlu lolo kumawebhusayithi kuphela afake i-TOP 1-100.
Ngaphansi kwengxenye yokuqukethwe, uzobona ithuluzi le- 'Page Uniqueness Check' lapho ngemuva kokuchofoza lizokuhambisa ekhasini lalo. Yilapho uzothola ukuthi i-Google ibona ikhasi lakho lewebhu lihlukile noma cha. Kufanele uqaphele ukuthi noma ngabe uqinisekile kabili ngobunye bokuqukethwe kwewebhu lakho, kungenzeka ukuthi kungenzeka ukuthi likopishwe ngomunye umuntu. Futhi uma lowo muntu ekhomba okuqukethwe kwakhe ngaphambi kwakho, i-Google izobona eyabo njengomthombo oyinhloko ngenkathi okuqukethwe kwakho kuzomakwa. Awufuni ukushaywa yinhlawulo ye-Google ngoba i-Google ikujezisa uma unenqwaba yokuqukethwe okubekiwe kwiwebhusayithi yakho.
ISemalt ikunikeza amaphuzu wephesenti ahlukile ukukwazisa ukuthi okuqukethwe kuwebhusayithi yakho kwenza kanjani emehlweni weGoogle. Isikolo esingu-0-50% sikutshela ukuthi i-Google icabanga ukuthi okuqukethwe kwakho kubhalwe phansi futhi akukho ithuba lokukhula kwesikhundla kwekhasi lewebhu elinjalo. I-Semalt ingakusiza ukufaka okunye okuqukethwe kwakho kwamanje ngokuhlukile ukuze kukunikeze isikolo esingcono.
Ku-51-80%, i-Google ibona okuqukethwe kwakho njengokubhala kabusha okuhle. Ikhasi lakho lewebhu linethuba elincanyana ekukhuleni kwesikhundla sewebhu. Kodwa kungani uzinze ngokwesilinganiso lapho uSemalt angakunika okungcono kakhulu?
Ku-81-100%, i-Google ibona ikhasi lakho njengehlukile futhi isikhundla sekhasi lakho lewebhu sizokhula ngokungenasisekelo ku-Google SERP.
Uzothola uhlu lwako konke okuqukethwe kombhalo okubonwa iGooglebot ekhasini lewebhu elithile elishiwoyo (uSemalt kuzokusiza futhi ukugqamisa izingxenye eziphindwe kabili zokuqukethwe kwekhasi lewebhu).
Futhi, uzothola itafula elibizwa ngokuthi 'Umthombo Wokuqukethwe Wangempela'. Lolu uhlu lwamawebhusayithi iGoogle elibheka imithombo eyisisekelo yokuqukethwe kwekhasi lakho lewebhu. Lapha ungazi kahle ukuthi iyiphi ingxenye yokuqukethwe kwekhasi lakho etholakala kuleyo naleyo webhusayithi.
Le yinkonzo ekubonisa ukuthi iwebhusayithi yakho iboniswa kanjani emiphumeleni yokusesha ye-Google ngenkathi kukuhlonza izinkinga zokukufaka enkomba. Ngaphansi kwalokhu, uzothola ukubuka konke, ukusebenza nezihloko.
a. Sibutsetelo: Engxenyeni yokubuka ngaphezulu, ungahambisa uphinde uqinisekise iwebhusayithi yakho. Ungangeza nama-URL wakho kwinkomba ye-Google.
b. Ukusebenza: Imininingwane etholakala lapha izokutshela ukuthi isebenza kanjani iwebhusayithi yakho. Ungaqhathanisa imininingwane yezikhathi ezithile zosuku / isikhathi. Lokhu kuzokusiza ukuthola amandla wewebhusayithi yakho futhi nawo wonke amaphutha athinta isimo sakho ku-TOP.
c. Ama-Sitemaps: Yilapho ungathumela khona isayithi lemephu yewebhusayithi yakho ku-Google ukubona ukuthi yimaphi amasayithi aqokiwe futhi yimaphi aqukethe amaphutha.
Ngaphansi kwetafula le-'Sitemaps Kuthunyelwe ', ungabona inombolo yamamephu owathumele kukhonsoli yosesho lweGoogle. Ukusuka lapha ungabheka isimo sabo kanye nenombolo yama-URL aqukethe.
Ithuluzi le- 'Speed Speedzerzer' lisetshenziselwa ukuthola ukuthi isikhathi sakho somthwalo wekhasi siyahlangabezana yini namazinga we-Google. Izokhomba namaphutha adinga ukulungiswa futhi ikunikeze iziphakamiso zokuthuthuka ezinembile ongazisebenzisa ukuthuthukisa isikhathi sokulayisha sekhasi lakho le-web. Izosilingisa izikhathi ezimaphakathi zomthwalo kuzo zombili iziphequluli nezeselula.
Umuntu akakwazi ukugcizelela kakhulu ukubaluleka kokuhlaziya ukusebenza kwe-SEO yakho futhi kule ndatshana, ungabona ukuthi lokhu kwenziwa kanjani ngendlela engcono kakhulu - indlela yeSemalt.